Ku soo biir Shabakadeena - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Ku soo biir shabkadayada
Hadafkeenu waa inaan daryeel caafimaad oo tayo leh u keeno dhamaan dadka reer Washington adiga ayey kugu tiirsan yihiin.
Bixiyeyaasheena ayaa laf dhabar u ah himiladeenna si aan ugu gaarsiinno xubnaheenna daryeelka ugu tayada sarreeya.
Waad ku mahadsantahay xiisaha aad ugu biirtay shabakada bixiyaha ee Community Health Plan ee Washington (CHPW). Annaga ahaan, way ka badan tahay ganacsiga - waa iskaashi saamayn dhab ah ku leh tayada nolosha dadka.
Si aad ugu soo biirto shabakadeena, fadlan buuxi oo soo gudbi khadka tooska ah Foomka Diiwaangelinta Bixiyaha. Waxaan dib u eegi doonaa macluumaadkaaga oo kula soo xiriiri doonaa 30 maalmood gudahood oo ku saabsan codsigaaga.
Haddii aad su'aalo qabtid, fadlan la xiriir Waaxda Xiriirka Bixiyaha ee: [emailka waa la ilaaliyay]
Foomka Muddada Beddelka Bixiyaha
Foomka Muddada Kiliinikada iyo Kooxda
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington, waxaan aaminsanahay in qof kastaa uu xaq u leeyahay inuu ku noolaado nolol caafimaad leh, waxaanan ku dadaalaynaa inaanu taas suurtogalno Waxaan si sharaf leh ugu adeegnaa ku dhowaad 250,000 xubnood iyada oo loo marayo Apple Health (Medicaid) iyo Medicare Advantage alaabta.
Fadlan la soo xiriir Adeegga macaamiisha haddii aad qabtid su'aalo dheeri ah ama aad jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaqeybgalka shabakadda bixiye ee Beesha Caafimaadka Qorshaha Bulshada.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: May 11, 2021